wikileaks nandiso fanantenana ahy sy tsiambaratelo hozaraiko | Hevitra MPANOHARIANA
Na dia lazaina ho laika aza ny fahefana bodoina eto Madagasikara ary dradradradraina hatrany ny tsy fifangaroan'ny politika amin'ny fivavahana dia ny fiangonana na ny fikambanam-pivavahana no tena andrin'izy ireo sy hananany hamaroan'olona tsy azo ambaniana velively. Ny voalohany amin'izany sady lehibe indrindra dia ny EKAR eto Madagasikara. Indray mandeha, fony mbola Ravalomanana no teo amin'ny fitondrana ary tsy mbola nisy fofony akory ny hisian'ny fiokoana tamin'ny 2009 dia niditra fiangonana EKAR iray tany ambanivohitra tany ny tena noho ny fanasana mariazy. Nandritra ny sermona dia toa natsidika kely ny famelezana ny mpanankarena ho mpitady tombontsoa ka tsy mahalala ny "madinika"; na dia tsy miteny mivantana aza ilay pretra dia toy ny filoha am-perinasa no tiany tondroina tamin'ilay sermona. Mbola tsikaritro hatrany io tamina toerana iray mbola nanasana ny tena ihany koa.
Tsy dia zatra ny any loatra moa ny tena fa tamin'izany fotoana izany ny hevitro tao anatiko tao dia hoe mpiaro ny "madinika" kosa ny Katolika ary efa ahafantarana azy izany ka tsy tokony hahagaga raha misy ny toriteny toy ireny. Ny zava-nitranga anefa dia izao, raha maro ny katolika no mpanohana an-dRavalomanana dia nihanangatsiaka tamin'izany fanohanana izany ry zareo avy eo ary nisy aza olona mafana fo teo aloha no latsa-pitenenana fa misy tsy mety mihitsy ny ataon-dRavalomanana, marihina fa ireo tsy mitsahatra ny mamonjy lamesa isan'alahady ireo nanana fangahatsiahana ireo ka toy ny mampanontany tena aza indraindray ny mahita Katolika mbola manohana an-dRavalomanana hoe sao dia tsy nazoto nankany ampiangonana loatra izy ireny ka tsy nahazo faharesen-dahatra loatra? Fanontaniana adaladala izany fa tsy voatery ho izany tsy akory no marina.
Ny hita manko rehefa mafana ny adihevitra politika ao amin'ny facebook ao dia tia mijery hatrany ny mombamomba ilay olona iadian-kevitra aho hoe tahaka ny ahoana moa ity olona ity? Variana ny tena avy eo fa mahatratra na mihoatra ny 80% amin'ireo lazaina ho tsy miraharaha politika nefa mamely ny mpanohana ny ankolafy telo na ny ankolafy Ravalomanana manokana dia manonotena ho Katolika avokoa. Tranga tsy azo tsinontsinoavina velively izany amiko fa nisy fanefena tao ambadika matoa indraindray mivadika ho fankahalana ny olona manohitra izao fitondrana nangalarina izao aza ny hevitr'izy ireo. Tsy nisy nahasahy niteny loatra koa moa ny hafatry ny filankevitry ny Eveka eto Madagasikara tamin'ny volana Novambra 2010 iny ka nanentanan'izy ireo ny olona handray anjara amin'ny fifidianana ho avy rehetra, izany hoe manomboka amin'ilay fitsapa-kevi-bahoaka. Diso amiko noho izany raha ny Monsenera OMAR irery ihany no lazaina ho manohana (ankolaka) ny fitondrana fa ny rafitra an-tanantohatra katolika eto Madagasikara amin'ny ankapobeny mihitsy no manana ny heriny. Manaporofo izany ny fisian'ny olona nandrotsa-bato izay manana ny ampaham-bahoaka tokoa. Efa nieritreritra avy hatrany aho fa farafahakeliny efa ny 35%n'ny mpifidy no efa azo aloha noho izay fanentanana izay.
Fikambanam-pivavahana tsy azo ambaniana an-drenivohitra ihany koa ny fiangonana protestanta tsy miankina ka ny lohalaharana amin'izany ny FPVM. Mazava loatra fa azo heverina ho fiangonana niaritra fanenjehana manokana ny FPVM noho izany tsy hanohana velively an-dRavalomanana raha azony atao koa izany. Ankoatra izany koa ireo fikambanam-pivavahana vitsivitsy toa nahazo sehatra kokoa tamin'izao fahefana izao ary ireny hita matetika amin'ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana karakarain'ny mpanohana izao fahefana misy izao ny mpitarika azy ireny. Na dia mbola te-hamahavaha kokoa aza aho dia atsahatro kely indray aloha fa manana ny adidy aman'andraikitra tsy maintsy sahanina fa ny tsara indrindra aloha dia ny mamakafaka fa tsy mandray am-bolony loatra. Marihina fa tsy natao velively hananjehana fiangonana na ireo olona ao amin'ny fiangonana ity lahatsoratra ity fa mba tsy aritra ifampizarana fotsiny ary tahaka ny hoe fady ny miresaka ilay izy dia toy ny hoe tsiambaratelo ilay resaka.
Jentilisa, 8 desambra 2010 amin'ny 13:50
efa nanoratra lava be ah dia very le izy le tsssssssssssssss
aleo radem indray fa tssssssssssss
tsy tian'i A/tra hanakiana an'i odon ah haha
Nampidirin'i simp @ 00:18, 2010-12-09 [Valio]
za Katolika fa za zanak'i Dada foana hatreto,tsy miova io
Nampidirin'i Fanja @ 06:44, 2010-12-09 [Valio]
Nampidirin'i Electronics Sky @ 04:03, 2011-02-14 [Valio]